Dhibaatada guud | Shandong Dingtaisheng Makiinado Technology Co., Ltd.
DHIBAATADA CAADIGA AH
DHIBAATOOYINKA CAADI AH IYO XALALADA SOO-CELINTA GUUD
Nooc kasta oo qalab ah ayaa ka soo muuqan doona inta lagu gudajiro dhibaatadan ama dhibaatadaas, dhibaatadu ma ahan mid laga cabsado, furaha ayaa ah sida saxda ah ee lagu xaliyo dhibaatada.
1. Maaddaama heerka biyuhu qaldan yahay, heerkulka biyuhu sarreeyo ama hooseeyo, daadashada dheecaanka iwm, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato habab daaweyn oo sax ah iyadoo loo eegayo dhibaatooyinka kala duwan.
2. Giraanta wax lagu xidho ayaa duqoobay, daadinaysa ama jaban. Tani waxay u baahan tahay kormeer taxaddar leh ka hor intaan la isticmaalin iyo beddelidda waqtiga ee giraanta wax lagu xiro. Mar haddii nasasho dhacdo, hawlwadeenku waa inuu si deg deg ah ku sii socdaa ama ku beddelaa iyadoo la tixgelinayo hubinta heerkulka iyo cadaadiska aaminka ah.
3. Koronto la'aan ama gaas oo go'an Markii aad la kulanto xaaladdan oo kale, si taxaddar leh u ilaali xaaladda hawlgalka ee soo noqoshada, samee diiwaangelin, oo dhammeystiray nadiifinta ka dib soo kabashada saadka. Haddii sahaydu joogsato muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad alaabta ku soo celiso soo celinta oo aad keydiso, ka dibna sii wad inaad shaqeyso inta aad sugeyso soo-kabashada saadka.